Square Fondant ကိတ်မုန့်သင်ခန်းစာ + ဗီဒီယို - အခမဲ့ဗီဒီယို
Square Fondant ကိတ်မုန့်သင်ခန်းစာ
တစ်စတုရန်း fondant ကိတ်မုန့်ကိုဖုံးလွှမ်းခြင်းနှင့်သူတို့အားချွန်ထက်ထောင့်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်မည်သို့မည်ပုံ
အပြစ်ကင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ စတုရန်း fondant ကိတ်မုန့် ! သငျသညျအကြှနျုပျ၏တစ် ဦး ကိုဖုံးလွှမ်းရန်မည်သို့ကြည့်ရှုပါတယ်လျှင် စတုရန်း buttercream ကိတ်မုန့်သင်ခန်းစာ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်စတုရန်းမုန့်ကို fondant တွင်မည်သို့ဖုံးအုပ်ရမည်နည်းဟုသင်စဉ်းစားမိနိုင်သည်။ စိတ်မပူပါနဲ့၊ ငါဖုံးထားပြီ။ ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ဒီချွန်ထက်တဲ့ထောင့်တွေကိုနဂိုအတိုင်းထားရှိနေစဉ်မှာ fondant တစ်လုံးထဲမှာစတုရန်းထောပတ်မုန့်ကိတ်မုန့်ကိုဘယ်လိုဖုံးအုပ်တယ်ဆိုတာကိုအတိအကျငါပြမယ်။
ချောကလက် ganache နှင်းခဲအောင်ဘယ်လို
ဘယ်လိုစတုရန်း fondant ကိတ်မုန့်ကိုဖုံးလွှမ်းရန်
သင်လိုအပ်သည့်ပထမ ဦး ဆုံးအအေးခံစတုရန်းမုန့်ညက်သည်။ ဖြစ်နိုင်သည် အချစ် ဒါမှမဟုတ် ခွေးရူး ဒါပေမယ့်မင်းရဲ့ကိတ်မုန့်နဲ့အေးတဲ့အခန်းကအေးလေလေ၊
သင့်ရဲ့ကိတ်မုန့်ရဲ့အကျယ်ကိုတိုင်းတာပြီး ၃ နဲ့မြှောက်ပါ။ ဤသည်ကသင်၏ fondant ဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်ဘယ်လောက်ကြီးမားတဲ့သင်ပြောပြလိမ့်မယ်။
သင့်ရဲ့ fondant အထူ 1/16 မှထွက်လှိမ့်။ ငါပြောင်းဖူးမှုန့် poof နှင့်တစ်လှိမ့ pin ကိုအသုံးပြုပါ။ သင့်ရဲ့ fondant တော်တော်ပတ်ပတ်လည်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်ကြိုးစားပါ။
သင်၏ချစ်သူအားသင်၏လှိမ့်သော pin (သို့) ကြီးမားသော PVC ပိုက် (ဆေးကြော။ သွေ့ခြောက်) ပေါ်သို့လှိမ့်။ စတုရန်းထောပတ်မာမုန့်ကိုပြုတ်ပါ။
အဆိုပါ fondant ၏ထိပ်အောက်ရှိမည်သည့်ပူဖောင်းထွက်ချောမွေ့
fondant အပေါ်ဆုံးအစွန်းတစ်လျှောက်ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားကြောင်းသေချာစေရန်နှင့် fondant ၏အောက်ပိုင်းသည် turntable ပေါ်တွင်မှီခိုနေခြင်းမဟုတ်ပါ၊ ချိတ်ဆွဲထားခြင်းသို့မဟုတ်၎င်းအား fondant မျက်ရည်ကျစေနိုင်သည်။
fondant အားထောင့်များသို့ ဦး စွာဖိ။ ဖောင့်ကိုဆွဲ။ မဖျက်မိစေရန်သတိပြုပါ။
သင်၏ထောင့်များအားလုံးပြီးသည်နှင့် fondant ပြားကိုနှစ်ဖက်စလုံးတွင်နှိပ်နိုင်သည်။
ပိုလျှံ fondant ချွတ်ချုံ့ခြင်း, 1 about အကြောင်းကို fondant ပတ်လည်၌ရှိသမျှသော fondant ချန်ထား။
စတုရန်း fondant ကိတ်မုန့်ပေါ်ချွန်ထက်အနားရဖို့ကိုဘယ်လို
သင်၏ကိတ်မုန့်သည်မည်မျှကြီးပြီးလေးလံသည်ကို မူတည်၍ ကိတ်မုန့်၏အပေါ်ဘက်တွင်သားရေစာစက္ကူတစ်ရွက်ချပြီးလျှင်ကိတ်မုန့်ပြားတစ်ခုသို့မဟုတ်ဖြတ်ဘုတ်ကိုချပါ။
ကိတ်မုန့်ဘုတ်ကိုဖုံးအုပ်ပြီးသည်အထိ၎င်း fondant ၏နှစ်ဖက်စလုံးကိုအလုပ်လုပ်ရန်သင်၏ fondant ချောမွေ့စွာအသုံးပြုပါ။
သင်၏ fondant ချောချောမွေ့မွေ့ကိုသုံးပြီး fondant ၏အပေါ်ဆုံးအနားနှင့်ထောင့်များကိုကိတ်ဘုတ်မှဆန့ ်၍ ၎င်းတို့ကိုထက်မြက်အောင်ပြုလုပ်ပါ။ သင်သူတို့ကိုလိုချင်သည်ထက် ပို၍ မူတည်၍ ခဏကြာနိုင်သည်။
ပိုလျှံသောဖောင့်ကိုကိတ်မုန့်၏ထိပ်အစွန်းမှ ဖြတ်၍ ကိတ်မုန့်ကိုပြန်လှည့်ပါ။
ဒါကငါစတုရန်း fondant ကိတ်မုန့်ပေါ်မှာငါ့စူပါချွန်ထက်အနားရပုံကိုပဲ! အကယ်၍ သင်သည်အလွန်ပူသောဒေသတွင်နေထိုင်ပါကအဖြူရောင်ချောကလက် ganache (သို့) အမေရိကန် buttercream ကိုသုံးရန်အကြံပြုသည်။ ဒါကခင်ဗျားရဲ့ကိတ်မုန့်တွေကိုသင်ဖုံးအုပ်နေတုန်းပျော့ပျောင်းလာတာမဟုတ်ဘူး။
ကိတ်မုန့်ကို fondant ထဲဘယ်လိုဖုံးရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော့်ဗွီဒီယိုကိုသေချာကြည့်ပါ။ သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကကျွန်ုပ်အားမှတ်ချက်များကိုသာပြောပြပါ။
ကြေးမုံကိတ်မုန့် Glaze စာရွက်
Apple Filling စာရွက်
ချောကလက်ဆွစ် Meringue Buttercream
jello မပါဘဲ gummy ဝံဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
ဤသူကားငါ၏အခြေခံစာရွက် gelatin စာရွက်ဖြစ်ပါတယ်။ gelatin ပူဖောင်းများ၊ တောင်ပံများ၊ ရွက်များ၊ စားသုံးနိုင်သောတောက်ပသောအရာများနှင့်အခြားအရာများပြုလုပ်ရန်ဤအရာကိုကျွန်ုပ်အသုံးပြုသည်။
Chocolate WASC ကိတ်မုန့် (အမွှေးအကြိုင်ချောကိတ်မုန့်ရောစပ်ခြင်း)
ဤချောကလက် WASC သည်အလွန်လွယ်ကူပြီးအရသာပြည့်ဝသောအရသာနှင့်နီးပါးအရသာရှိပါသည်။ ခြစ်ရာဖုတ်ရန်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူးလား ချောကလက်စမ်းကြည့်ပါ WASC!